MUUQAAL: Culimada Puntland “Waxay ahayd In Maydka la aaso Intaan Xilka laga qaadi Dhoobo-Daareed” | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
MUUQAAL: Culimada Puntland “Waxay ahayd In Maydka la aaso Intaan Xilka laga qaadi Dhoobo-Daareed”
Nov 8, 2019 - 48 Aragtiyood
Muqdisho ( Kalshaale ) Culimada Puntland ayaa khudbada Jimcaha uga hadlay dhacdadii ka dhacday Baarlamaanka Puntland Taasi oo Sababtay Dhimasho iyo Dhaawac.
“Riditaankii Dhoobo-Daareed degdeg baa kujirey, dhaawacii oo yaal dhimashadii oo taal baa la ridey horta inaan maydka aasno sow ma suubanayn.” Ayuu yidhi Sh Daahir Aw-Cabdi
Wuxuu sidoo kale Sheegay inaanu Siciid DENI Joogin doonin Xilka, Wuxuuna ku booriyey Bulshada inay la shaqeeyaan.
“Reer Puntland waxaan leeyahay Madaxweyne Siciid idinkoo indhaha kala haya baad duhur cad doorateen 4 sano baa u dhiman boqor maaha isagaa madaxweyne ka ah wadanka inta uu joogo, waxyaabaha la sheeg sheegayo raali kama nihin, dhacdadii baarlamaanka waxaa kujirey degdeg xabadu xal maaha.” Ayuu yiri Sh Daahir Aw-Cabdi.
Dhinaca kale Wuxuu khudbadiisa uga hadlay Arimo kala duwan oo la Xidhiidha Xaalada Soomaaliya, Wuxuuna Fariin muhiim ah u diray Maamulada iyo DF Soomaaliya, Wuxuuna xusay in Soomaaliya ay hada heshay Dawlad Fiican, oo Dalka dibadiisa si wacan uga dhaqan gashay, Balse gudaha ay dagaal kula jiraan Siyaasiyiinta iyo dadka Soomaaliyeed, wuxuuna ku baaqay in la garab galo Dawladda.
Hoose Ku Qor Fikradada ( 48)
Malaha waxay u haystaan in somaliya uu ka jiro nidaam iyo kala dambayn.Waar dadka somaliyeed yaa u kala sheega sida wax u kala baxaan.
meel kasta oo Tuugi ku hasato oo maamul lagu sheego waxay ku sheegaan dawlad kkkkkkk
Lacagtii Emaaraatka ayaa shaqynaysa.
Intaa qaado oo waxaa samee,intaa qaado oo ninkaa dil,intaa qaado oo kkk
Dhoobo darood. xoogaa lacag ah oo qadar laga keenay ayaa farmaajo u soo dhiibay. Wuxuu ku dhahay barlamaanka pudland xoog ku qabso oo meesha dhibaato haka dhacdo si pudland qalqal loo geliyo.
Daroodkii yar yaraa ee pudland daganaa waxaa laga dhaadhiciyay majeerteenbaad ku hoos dulman tihiin ee kaca si pudland loogu kala tago.
Dee maxaa ka raacay 9 xildhibaan ee maxamuud salebaan ayaa ka tayo badan.
Dani isna kaarto ayuu adeegsaday dhulooskii ayuu 20 20 kun u dhiibay. Dhoobo darood albaabka ayaa la tusay.
NIN lacag iyo dhulos ugaaryahan maxamuud u badan haysto miyaad ciyaar uga adkaan kartaa.
Hhhhhhhh mayla socotaa farxiyooy.
Meesha waa in laga danbeeya qoladii power ah ismaqiiq mafcna,arinta dhoobo kukacayo waxeey lamid tahay qolooyinka galmudug wada sheegta oo looguyeero 11ka qabiil oo ceyr iskutaaga
3 gaadhi oo mid Karaash leeyahay labana Dhoobo ayay waalidooda is yidhaahdeen Garowe ku qabsada.kkk
Xildhibaanada Dhulbahante iyo Warsangeli qasab ayaa gawaadhida gaashaaman ee MJ guryahooda uga soo qaadeen, si ay mooshinka u taageeraan!
Meel aan lagu kala adkaan, nabadi kama dhalato!
Dhoobo Daarood waxaan leenahay iska kaaley Xamar.
* JIKO ABGAAL WAA JAGO BANAAN, Ninkii Soo Jabaa Jiif sahaa.
ASC dhamaantiin. Happy Fridays
Warkaan culumada Majeerteen waxuu u egyahay in eey jideeynayaan in ninkaan Warsangali sheegto jagada laga qaado, sharuudooda kaliya waa in “marka hore meeydka la’aaso”. Taas macno weeyn ayaa kujirra qofkii caqli leh.
Now, arrinkaan labadaan barri ka taagnaa Garoowe, waxuu calaamad u yahay waxyaabo dadka indheergaradka ah ka hadli jirreen, taas oo ah, in wax qabiil lagu dhisay, wax fikirkaas duuga ah ee qabiilka lagu dhisay, eeysan aheeyn wax “sustainable” ah, oo muddo dheer socon karra. Intii uu u shaqeeyn karray Majeerteenka “gaashaankaas” shield, eey iskaga difaaceen waxa daanyeernimada ah ee Somaliya kasocday, waa uu u shaqeeyay, laakiin, waxaa iyaga laftigooda Majeerteenka xataa kuwooda waxbartay eey ka cabsanayaan in eey “elephant in the room” maroodiga qolka ku dhex jirra ka hadlaan, kaas oo ah nidaam qabiil ah, waxa uu kaliya shaqeeyna karaaa muddo kooban. Waxaa loo baahanyahay wax kale oo kor looga sii qaado maamulkaas qabiilka ah. Waana laga cabsan in nidaam casri ah, oo iska dhaaf, qof Somali kale ahee, xataa, uu xaq, cod, xorriyad, iyo xaquuq uu lahaan karro qofkasta oo Garoowe iyo Boosaaso kunool muddo lagu heshiiyay oo sharci ah.
Waxaan gudoomiya baarlamaan ayaa lariday, ra’iisalwasaare ayaa la riday, motion, waa waxyaabaha daanyeernimada ah ee Xamrna marar badan ka dhacay, laguna dhaqmi jirray. Waana calaamad muujineeysa dadkaan in eey daanyeero yahiin.
Waar horta ninka weyn maxaa “Dhoobo Daarood” loogu bixiyay? magacu miyaanuu cay ahayn?
Dhaqamada aan ku arkay dowladda nabad iyo nolol.
Mexey isaga egyihiin. Siyaad Barre iyo farmaajo.
Dowladda dhexe oo awooda dalka kaligeed maamusho.
Siyaad Barre dadka ka aragtida duwan waxaa loogu yeeri jiray kacaan diid.
Farmaajo qofkii kasoo horjeedo waxaa loogu yeraa qaran dumis.
Tusaale waxaa kuugu filan weerarkii guriga. Ina cabdi shakuur. Oo loo weeraray aragtidiisa.
Anu halkaan ayaan horay uga sheegay farmaajo iyo kheyre. In ay adeegsanayaan kaartadii alshabaab.
Alshabaab wexey hubeyeen qabiilada yar yar si. Ay ugu jebiyaan qabiilada waa weyn.
Dowladda farmaajo iyo kheyre. Wexey kicinayaan qabiiladii yar yaraa. Ayagoo ka dhaadhicinaayo in ay ku hoos dulman yihiin qabiilada waaweynka isku sheegay.
Tusaale waxaa kuugu. Hadda dowladaan lagama maro.
Dhuloska samaroonka gaaljecelka shekhaasha murusadaha marexaanka dishiishlaha. Baadicadaha. Dudublaha warsan geliga.
Farxiyo iyo Mr bahal. Ayaa maanta laga celin la.yahay garqaad sow wax lala yaabo Maaha.
Mayla socotaan. Xoogaga wadaniyiinta cusuboow.
Duqbiloow ayaa quustay.
Mr bahaloow. Iyo farxiyooy.
Videowgaan ilaa daawaada.
Waar maqaaxidu caawa dabkaa ka dhacsane maxaa siya.
Meeday tii aanu ilmaabdiga ahayn ee qalaafaa weyneyd?kkk
Naa shaah noo keen, ardaaganu fadhinaa!
Caawa meesha Anigaa ka chief ah.
Bun iyo canbuulo saad isku tihiin.
Masa waxaad tahay qolada habeenkii la dhuunto maalintiina ka faano.
Hhhhhhhhhhhhhh iska qabo sabaaxadda.
Garqaad awoow waxaan tiriyay Hawiye oo 7-ba xisbi siyaasadeed samaystay si ay doorasho u galaan. Horta ma Hawiyaha uun baa is dooranaya/tartamaya ilayn cid kaloo doorasho qaab xisbi ku salaysan idinkula tartamaysaa ma jirtee!
Waar awoow igadaa biladaa canbuulada beribaa wax iga raaceene
Maalin baan anoo is leh gabadh aan ka helay ugu dhawoow, ka codsaday inay canbuulo ii samaysoo. Waa ii samaysay laakiin nacamtu bilaahay wixii iga raacay inaanan weligay ilaaweyn.kkk
Bilaa cuntee awoow ee bunka ii keen!
Xaange & LOP ma mooshinkii Karaash bay ku ku mashquulsan yihiin si ay gacan utaagayaa ugu helan!kkk
Marka aad wax layso formaajo eeda Saar.Waaba wax dadka lagu qaldikaro.
Dawladda ayaa soo dirtaykkkk warar laga helay Garoowe ayaa sheegay in laysku haystay lacag iyo contracts KU saabsan Emaaraàtka.
Macdan degaanka uu ninkii Ka soo jeedo.iyo ninkan oo Ahaa caqabad loo baahday in laysku hor qaado.
Awoowe dee meeshu waa xamar. Xamarna hawiye iyo wax ku Hoos nool unbaa joogo. Taas ayaa keentay in ay ayaga oo kaliya muuqdaan.
Xisbiyadu waa wax fiican waa saan saan horuu socod ah.
Weliba muduloodkii ayaa ugu badan xisbiyada. Wexey u haystaan kursiga in ay ayagu leeyihiin.
Hooyadaa waxay ka xishootay inay kuu sheegto inaad tahay GARAC ISAAQ dhalay.
Markaasay kugu maaweelisay inaad Mareexaan tahay aabahaana SNM dishay!
Maxaad u carartaa adeeradaa SNM meesha yimaadaan!
Hadaad xiiso u qabto aabahaagii asalka ahaana waa kuu raadinaynaa!
Keleb bilaa akhlaaqa baad tahay, ku dhashay guri qaxbadeed, rag badan oo halkaan soo gala ayaa aabe ama adeer kuu ah!
Laaleys iyo garqaad.
Miyaad arkeyseen meeshii laaluushka lagu bixinayey,maxaase 50xildhibaan ka faquuqay
Waar Dee waad nagu walacdeene naga leexda.
@ laaleys,ma naag Dhulbahante ah baa qalaafyo leh,mise waxad igu khaldeysaa
H/jecladii gaagabeyd kelyaha buurbuurneyd.
Hire walanwal baa yaabey.
Hooyo cayga jooji.
Kuwa hooyooyin-kayaga Caaya inaad difaacdo yaa kuu fasaxay?
Hooyo waa hooyo!!!
Awoowe maxaad mr bahal ku haysataa.
Odagu waa xure iidaa waa laandheere irirsamaale. Hargeysa xamar iyo jabuuti. Kafiil ayuu ka noqon karaa.
Odaga xoogaa canjalad kacaan ayaa ku xiran. Ceeb kale maleh.
Ka booti odaga.
Awoowgiisa lahaa naaneysta ,qurux baa loogu bixiyey cadaaan saa’id ah,bay reerku can Ku yihiin,ciidda cad am a carrada cad ayaa loogu magac darey,waa nin saldanad kasoo jeeda waxba ugama baahna sinsibaariyintan Kala foolxumada badan.
Awoowahay c/xakiin cade,noolow.
Boowe budhleyn aa budhbudhey.
@laaleys yaa kugu yidhi sadex gaadhi buy haystaa karaash,ilaahey baan Ku dhaartee
Hadey karaash isku doontaan. Iney kabtey aawey ka dhici doonto🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔪🔪🔪🔫🔫🔪🔪🔫🔫🔪🔪🔫🔫🔪🔫🔫🔫
Farxiyo & Garqaad
Anigu qof iskama caayo. Shalay oo dhan sumad laawahan gabdhaha/hooyooyinka qabiilkayga ka dhashay buu caayayay. Dee ana xaqiiqduun baan farta ka saaray, inuu garac yahay!
@Farxiya qacqacda hore waa kugu soo toosinayee shaah hayl iyo xawaash leh ila soo gaadh inaabti!
Axmed garaash. Hadda wuxuu ku quustay indhihiisa. Hadal danbe ka maqli maysid.
Marba hadii suldaankii warsan geli habeenmadoow lagu dhahay ka lugeey garoowe subaxdiina iigaarkisiina la daba dhigay. Axmed garaash asba caqli waa leeyahay oo garaad saleebaan in uu mar kale qoxo Kama sheqeydoono. Kkkkkkk kaftan
Baayo halkaas reerbaa iska leh.
Maqayadaas nimaan majeerteen aheyn Kuma ammar taagleyn karo.
Farxiyooy maxaad farmaajo ugu eedobeysaan kuleey xitaa idinma Soo hadal qaadi karee. Ina adereey.
Farmaajo isagaa goof abgaal lagu ilaaliyaa een geedka qaboow yuusan idinka saarin.
Harti ayaa yaabay
“Dhoobo-daareed” af waqooyi markaad ku sharaxday baan fahmay. Mahadsanid.
Ta kale hadaanad cawarayn oo il qudha wax ku akhriyin anigu meela kuma qorin karaash baa 3 gaadhi haysta.
Waxa aan qoray hadal uu cadeeyay Dhoobo-daareed oo ah; In baarlamanka Puntland markii Deni qabsaday ay joogeen 3 gaadhi oo tikniko ah, laba Dhoobo leeyahay midna Karaash!
Warka waxaan ka soo xigtay Dhoobo, daawo waa kan isagoo toos u hadlaya!
Garqaad saleebaan nacasnimuu garoowe u fadhiyaa,kaasi garaad nooma aha dhiiga
Doofaarka Ku Duran.
Axmed karaash hadaad aqoon u leedahay reerkuu ka dhashey,sidaas umaad hadasheen.
Wlhi blhi tlhi,,waa kaas yaa ka hor taagan
Car juuq ha u dhaheen.
Warsangeli iyagaa xigsanayey majeerteen,oo lahaa isku bah baanu nahay,laakiin indho run bay Ku ooyaan.
farxiyo nimankan fidnida wada sidey kuu wadayn
Ma waxay kaa kenen inaad tirahdo dhiig doofaar ba
Ku jira garaadkii harti? arinta dib uga noqo gacaloy
Mar horaan kuu sheegay farmaajo soomaaliweyn baanu ula simanahay, hadey naag Dhulbahante ahi dhashey macnuhu maaha
Inuu noo afduuban yahay.
Dawladan federaalka waxanu uga baahanahay
Aqoonsiga,taasna anagay nagu xidhan tahayinaanu midowno mowqif isku raacno
,ka dib aqoonsiga baryo maaha ,waa miiska
Laakiin anigu waan taageerayaa intaan u jeedo horumarka wadanka ka socda.
HORUSOCOD DHAQAAQYEE ,HADHAYOOW NASOO GAADH,HADII KALENA YEELKAA,WAA YEELKAA.
LOP caawa aamus buu ku jawaabay.
Garaad saleebaan sharaftii iyo cimaamadii
Tolkii saareen,wuxu ka door bidey inuu maxjarka garoowe fadhiisto,isagoo tolkis lagu bahdilayo siyaasad iyo dhaqanba.
Jabhad,hartinimo wax LA yidhaahdaa ma jirto,iska ilooba filinkaas.
Taleex ,sarmaanyo,xudun,godaalo,,intaas oo degmo tii uu doono buy fadhiisan karaa
Oo tolkii ugA talin karaa,caku dhinaciisa nalooga soo dhacay.
Ninka caawa jooga garoowe ee Dhulbahante aniga agteyda wuxu ka yahay ey bakhtiyey.
Runta aynu isku sheegno.
Gudoomiye Dhoobo Daarood waa soo laabanaya isagaana ah Gudoomiyaha baarlamaanka Afarta sano ee soo socota .
Arintii Denni xoolo iyo kooxdiisii Aaran Jaan waa ku xumaatay , Ceeldaahir oo ku taala Wadada dheer ee xidhiidhisa Garoowe iyo Boosaaso waxaa Goostay Maleeshiyaad Dhoobo ka socda , Taas macnaheedu waxa weeye inaan Kiish Bariis ah Garoowe imaneyn . Denni mudo kooban buu ku Caatoobaya madaama Kaluunkii iyo Bariiskii dekada Boosaaso Ceeldaahir lagu leexistay kkkkkkkkkkkkkkkkkk
Denni xoolo waa uunsaday lkn isaga isgubay
Gudoomiye Dhoobo Daarood oo Caawa soo Gaadhay Degmada Xingalool ee gobolka Sanaag ee somaliya .
Khalad baa dhacay……
Iminka Hartigii gar baa la isula fadhiyaa…
Mj iyo Waroos labaduba gar yibil bay u noqdeen…
Arrinta waa la xallinayaa….xataa MJ baan isku raacsanayn sida arrinta u dhacday….la iskuma diidana in khalad dhacay…..laakiin hadda jilib culus baa gacanta ku haysa…..
Sidaan xogta hoose ku hayo, arrinku meel fiican buu marayaa……guurti culus oo Harti ah baa arrinka go’aan ka gaaraysa….
Hadda waxaa la isku hayaa, labaduba ma khaldanaayeen, mise mid baa khaladka lahaa…heshiis baa lagu yahay, sida wax u dhaceen inaysan fiicnayn……
Aniga markaan aragtidayda shakhsigaa dhiibto, eedda waxaan dusha ka saarayaa mr. Deni.. waa aniga ra’yigayga…
Puntland reer ma dhisan, waa la wada dhistay, awood la isuma isticmaali karo…absolutely waa khalad…
marka aan ka warsugno, maxsuulka soo baxa…
Norwich 0 – 2 Watford …EPL..
Friday Afternoon….What a Game!
Farxiyo garadka saldhigiisa waa SARMANYO halka
ayuu inta badan fadhiyaa markii qaylo soo yeerto
Ayuu garowe tagaa hada inta badan isimada
Waawayn way wada joogaan…. arintan hada
Dhacday UGUB maaha horaa birta la isaga asli
Jiray xalay dhalay ayaana laga noqon jiray miyadan
Maqal ama arag cisman max. mud oo qax ku tegey
Ceel afwayn miyadan arag ama maqal golahan oo
Hada ka hor lagu dagalamay dalkan intuu dowlad
Rasmi ah oo isku fidisa laga helayo wawarayda way
Socon… ee hala tagtagsado inta laga garayo gu.ga
Sxb meesha qadar oo dowladda ka socoto iyo emeraad oo ka socoto dani ayaa meesha isku qabtay. Waxaana ku adkaaday emeraad.
Waxaa kaloo jira dood ah pudland ma maamulo hartibaa mise waa maamulo majeerteen. Ayaduna wey cadaatay in ay tahay maamulo majeerteen. Horana waa loo ogaa.
Waxaana Cadeyn kuugu filan xildhibaankii su.aasha adkaan ee ka xanaajiyay. Governo dani wuxuu ahaa reer mudug majeerteen ah.
Shalay Markii loo codeynaayay dhoobo darood. Wuxuu ka mid ahaa dadkii u codeeyay in uu meesha dhaafo.
Hadda pudland laba wado oo kaliya ayaa u banaan.
1 in ay noqoto maamul majeerteen leeyahay oo kaliya Ninkii joogaa iyo ninka iska tagaayo.
2 in lawada leeyahay laguna kala yaaco. Maxaa yeelay waa caqab mar walbo ku hor go.an dowlad somaliyeed oo xamar looga taliyo.
Aniga aragtideyda waxaan qabaa maamulka pudland in lakala diro oo ciidanka joogana lagu wareejiyo dowladda somaliya. Loona sameeyo maamul hoos tago villa somaliya. Sida koofur galbeed iyo hiirshabeele.
Xamar halla wada aamino hana layska daayo cabsida.
Somalidu waa beelo nin walbanana yaqaan tuuladiisa..
Dad dhulkoodii meel ku ogeyn oo dad kale dhulkoodii ugu dhaaranaya..yaab
Warsamgeli waa Puntlander, ragga siyaasadda isku hata waa hawl u taal.
Dhoobo daareed, Xingalool waaba dhowdahay yuusan ka sokayn Ceerigaabo.
Xuunsho ayaa yaabtay.
Jabhad oda darood.
Lugta jecli laabta jecli jooji.
Qadar iyo emaraadka ayaa meesha isku haayo.
Meesha waxaa isku haayo waa nabad iyo nolol oo qadar hogaamineyso iyo aaranjaan aka majeerteen. Oo emeraad hogaanka u haayo.
Adu meel raac. Garaad baa yiri iyo waxbaa la xilinaa meesha mataalo.
Inkastoo aanan tageersaneyn. Nabad iyo nolol. Hadana waan qabaa pudland oo lagu kala tago in ay soo dedejin karto dowlad ay koofur yeelato.
Zoomed in to check for blow…but only found that KALSHAALE is a nose fro..N&N.
He must have a tucked the bribes behind those nose hairs!
Saaxiib….hal min gurani garaacay meelna uma fayooba….qof alla wax ugu daray siyaasi Soomaaliyeed niyad san ku seexan maayo…
Dal iyo dadba maamta waxaan kharar ugu jirnaa, in dillaal naga adeegto.
Xagga eeg waa imiraad, laguu sheegi maayo wax lagula heshiiyey..waaba ha i weeydiin.
Xagga kale waa Qadar, iyana sidoo kale waa ja i weeydiin waxaan kula heshiiyey.
Shacabka Soomaaliyeed ama gobol ha joogo ama Xamar ha joogee, waxba kalama socdaan waxa heshiisyo, Imaaraad iyo Qadar lala galay..
Qolo walba qolada kale ayey farta ku fiiqaysaa…..marka waxa dhan oo meesha ka socdaa waa dillaalnimo….
Nabad iyo nolol iyo taageerayaasooda haddaad tiraahdo Qadar ka warrama..waa dabadhilifnimo iyo mucaaradnimo..
Kuwa kale haddad weydiiso waxay Imaaraad kula heshiiyeen waa dagaal iyo hanna weeydiin
Somaali labo kiish baa lagu kala wataa kiish laga beecinayo Imaaraad iyo mid laga beecinaayo Qadar…
Saaxiib….hal nin gurani garaacay meelna uma fayooba….qof alla wax ugu daray siyaasi Soomaaliyeed niyad san ku seexan maayo…
Dal iyo dadba maamta waxaan khatar ugu jirnaa, in dillaal naga adeegto.
Xagga kale waa Qadar, iyana sidoo kale waa ha i weeydiin waxaan kula heshiiyey.
NIN culus waxaad sheegtay oo dhan waan aqbalay. Xaqiiqdii waxaad dhigtay halkeey aheyd.
Waa in sidaas loo wada fikiraa.
Waa in aan ugu yaraan wada qiranaa xaalka aan ku suganahay.
Xaalku wuxuu maraa.
Somaliland ayaa somaliya jabkeeda ku qososhay. Somaliya ayaa markeeda ku qososhay somaliland jabkeeda.
Dhuusamareeb ayaa Beydhabo jabkeeda Ku qososhay, Baydhabo ayaa markeeda Dhuusamareeb Jabkeeda Ku qososhay, nabad iyo nolol ayaa pudland jabkeeda ku qososhay. Somali wada jajaban ayaa midba kan kale Jabkiisa Ku qoslay.
Muxaafadkii ayaa Ku qoslay Mucaaradka Jabkiisa, Mucaaradkii ayaa Ku qoslay Muxaafadka jabkiisa, Dowladii ayaa Ku qososhay Shacabka Jabkiisa, Shacabkii ayaa Ku qoslay Dowlada jabkeeda.
Wadamadii Deriska ayaa Somali Jabkeeda Ku qoslay, Caalamkii ayaa Ku qoslay waxa Derisku Ku qoslay,
Dugaagtii ayaa Ku qososhay waxa Caalamku Ku qoslay, Daanyeer ayaa Ku qoslay waxa dugaagtu Ku qososhay, Daanyeerkii ayaa Ku qoslay waxa Daanyeerka kale Ku qoslay.
Waxa lagu wada qoslayo ayaa ah Aniga iyo Adiga oo Walaalo ah Jabkeena, Anigii & Adigii ayaa Ku wada qosolnay Jabkeena.
Seen uga Soo kabanaa Jabkeena? Mise jabka lafitiisa ayaa Ku sii qosolnaa?
Daanyeer ayaa quustay.
Sxb adiga siyasada somaliya ka socota waad ku
Jaha wareertay waxaad rabto si wacan uma garan
Kartid…. den iga a keligaa ma lihid… oo jahawarerka
Waa lagula qabaa aniga waxaan qabaa in deganada
oo nabad ah oo ayan ardaashu ka hana qaadin
Dowlad somaliyeed oo sal adag soo gaarto ileen
Qabiil qaran noqon maayee adna weli waxad qabta
In qabiilnimo QARAN lagu gaari karo qabiilada
Qaarna la karbaasho….